20 Haween oo qareeno ah oo maanta tababar loo furey | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA 20 Haween oo qareeno ah oo maanta tababar loo furey
20 Haween oo qareeno ah oo maanta tababar loo furey
Aqoon is weydaarsiga maanta uga furmay magaalada Muqdisho in ka badan 20 haween oo qareeno ah, kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalka ayaa waxaa uu socon doonaa sadaxda maalin ee soo socota, waxaana diirada lagu saari doonaa xal u helida xadgudubyada ka dhanka ah haweenka.
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda Cadaaladda Soomaaliya Dr Ismaaciil Jimcaale Calasow, oo furay aqoon is weydaarsiga ayaa waxaa uu kula dar daarmay gabdhaha qareenada ah in ay ka mira dhaliyaan hadafka ay isugu yimaadeen.
Dr Ismaaciil Jimcaale Calasow, ayaa sidoo kale ka sheegay furitaanka aqoon is weydaarsigan in wasiirka cusub ee wasaaradda cadaalada uu ku soo kordhiyya wasaaradda fikrada ah in la dar dar galiyo baahinta cadaalada iyo haweenka doorkooda kor loo qaado isla markaana gobolada dalka oo dhan la gaarsiin doono.
Sanado badan haweenka Soomaaliyeed kama dhex muuqan nidaamka cadaalada iyo ururada qareenada dalka haatanse, waxaa muuqata in wasaaradda cadaalada ay dadaal dheer ugu jirto in haweenku door weyn ka qaataan arintaan ujeedka laga leeyahay ayaana ah in haweenka dhibanayaasha ah ay helaan haween qareeno ah oo xaquuqdooda u dooda.
Previous articleWasiirka Qorsheynta oo sheegay in lala socon doono mashaariicda dalka laga fuliyo
Next articleShan nin oo lagu soo qabtay isbaaro oo la soo bandhigay